आर्थिक, व्यक्तिगत वित्त
आधुनिक जीवनमा ठूलो भूमिका विशेष बजेट मा, पैसा रूपमा यस्तो समय खेल्छ। यो कठिन यसलाई आय र व्यय हुन्छन् कि अनुमान छ। यी जो बिना यो आफ्नो बजेट नियन्त्रण गर्न सिक्ने असम्भव छ अनिवार्य घटक हो।
एक विशेष भूमिका आय र परिवार खर्च गरेर खेलिन्छ। कसरी सुरक्षित गर्न? कसरी आय र "अनादर" पैसा को रेकर्ड राख्नुपर्छ? यो प्रश्न धेरै गर्न चासो छ। आखिर, तपाईं कार्य ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ भने, त्यसपछि तपाईंलाई सजिलै मात्र होइन सुरक्षित गर्न कसरी, तर पनि केही आवश्यकता, र बस बचत को प्रयोजन को लागि "वर्षाको दिन" को लागि "अतिरिक्त" पैसा पन्छाउन सिक्न सक्छौं। सबै रहस्य र सिफारिसहरू हाम्रो ध्यान गर्न प्रस्तुत छ। शायद तिनीहरूले साँच्चै तपाईंलाई मदत।
पहिलो चरण बुझ्न, परिवारको राजस्व र खर्च निगरानी गर्न किन आवश्यक छ। शायद मामला र टाउको नै साथ छैन स्कोर गर्न आवश्यक छ? विशेष गरी आर्थिक भने, सिद्धान्त मा, राम्रो भन्दा बढी।
वास्तवमा, नगद नियन्त्रणमा - यो आधुनिक मानिसको जीवनमा एक अनिवार्य क्षण हो। तपाईं एड को वा कमी छ भने यो कुरा छैन। तिनीहरूले भन्न रूपमा, पैसा खर्च जस्तै छ। ताकि आर्थिक नियन्त्रण - ठूलो तरिका भविष्यमा विश्वस्त हुन। र बित्तिकै मुद्दा सिधै परिवार भन्छिन् रूपमा र त्यसपछि त्यहाँ केही आवश्यकता देखा पर्नेछन् छन्। र तिनीहरूले आवश्यकताअनुसार कवर गर्न आवश्यक छ। धन को एक सटीक गणना मात्र वित्तीय प्वाल, साथै उपलब्ध पैसा वितरण गर्ने अधिकार मा प्राप्त छैन। आय र सख्त नियन्त्रणमा पनि धन को एक सानो राशि विशाल लाभ र दक्षता दिन सक्छ को उपस्थिति मा, नियम, सञ्चालन गर्दै जो परिवार, को खर्च। तर हामी गणना र अनुमान सञ्चालन गर्न सक्षम हुन आवश्यक छ। यो मदत गर्नेछ? के एक गोप्य छ?
सामान्य मा, सबै कुरा जाँच सङ्कलन र त्यसपछि गर्न महिनाको अन्त बचत गर्नुहोस् सिफारिस गरिएको छ। यो जो साँच्चै परिवार बजेटको बाँडफाँड समिति मा मदत गर्न सक्छ सामान्य घटना छ। तर सबै होइन, र सधैं भुक्तानी रसिद संकलन गर्न काम गर्दैन। यो कुरा पहिले मामला संग काम छैन जो एक व्यक्ति, को "सङ्कलन" जाँच गर्न प्रयोग प्राप्त यति चाँडै यहाँ सुरु गर्न असम्भाव्य छ भन्ने छ। यो त, सजिलो इमानदार हुन छैन।
तसर्थ, निश्चित राख्न मद्दत गर्नेछ भन्ने एक प्रविधी छ परिवार बजेट (राजस्व र परिवारको खर्च)। तालिका! त्यो, एक महिनाको लागि आफ्नो खर्च को सबै दर्शाउने एक संवाददाता रेकर्ड हो। यो विद्युतीय र कागज हुन सक्छ। छैन आवश्यक नै समय मा चेक तपाईं खर्च वा विशेष महिना मा प्राप्त कसरी र के बस थाहा राख्न। एक सारांश यस प्रकारको मासिक पूर्ण आफ्नो आय र व्यय हेर्न मद्दत गर्छ। साथै, अर्थव्यवस्था सहयोग गर्न एउटा तरिका पत्ता लगाउन आवश्यक यो अनुशासन।
ठीक छ, हामी अझै यो विकल्प प्रयोग गर्नुहोस्। तालिका धेरै अस्पष्ट छ - यो कुरा परिवारको आय र व्यय छ। यसलाई विभिन्न परिस्थिति लागि उपयोगी हुनेछ भन्ने वस्तुहरूको विभिन्न समावेश गर्न सक्नुहुन्छ। तथापि, तपाईं सबैभन्दा आदिम मोडेल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई ठोस र कागजी कार्रवाई मन नगर्ने ती लागि सिद्ध छ।
के आवश्यक छ? आय र व्यय को रेकर्ड राख्न, तपाईं एक महिनाको लागि एक संवाददाता तालिका बनाउनुपर्छ। यो कम्तिमा पनि चार स्तम्भहरू हुनुपर्छ। ती हुन्:
वास्तवमा, हरेक दिन उपयुक्त क्षेत्रहरू आवश्यक परिवर्तनहरू प्रविष्ट मा हुन आवश्यक हुनेछ। एक महिना भित्र, हामी सक्रिय मात्र "आय" र "खर्च" प्रयोग गरिन्छ। तर अन्त मा वक्ता र आफ्नो फरक दुवै गणना हुनेछ। यो जो केवल पूरा गर्न सक्छन् सजिलो विकल्प छ। आय र परिवारको खर्च - कुनै विशिष्टताको छ तालिका। तर यो विस्तार गर्न मनमोहक छ। कसरी ठीक?
यो कुरा सबै आफ्नो अनुशासन र संगठन निर्भर छ। तर सम्झना: अधिक तपाईं परिवार बजेट ( "परिवार आय र व्यय" - तालिका) को रूपमा स्थापना र यस्तो कुराको मर्मतसम्भारको प्रयास बनाउन, आफ्नो गतिविधिहरु को प्रभावकारिता महिनाको अन्त्यमा हुनेछ ठूलो। सबैभन्दा आदिम संस्करण, हामी जांच छन्। तर यो सामान्यतया गणना को अन्त छ।
अक्सर बजेट पूर्ण र गहन विचार सञ्चालन गर्न लाभप्रद। कि, कि कम से कम निम्न स्तम्भहरू मा समावेश हुनेछ तालिका सिर्जना छ:
आय को परिणाम;
एकै समयमा, माथि वस्तुहरू पनि सानो वस्तुहरू विशेष स्थापित गर्न मद्दत गर्नेछ थप्न। तिनीहरूलाई अलग लेख्न उचित छ, तर लागत अनिवार्य समावेश। हामी ती जो बिना तपाईं सबै बाँच्न सक्दैन आधारभूत खर्च जस्ता कुराहरू बारेमा कुरा गर्दै छन्। यो पनि एउटा छुट्टै बचत स्तम्भ सञ्चालन गर्न एक राम्रो विचार हुनेछ। यो सबै आफ्नो कम्प्युटरमा गर्न धेरै सजिलो छ। हो, पूर्ण तालिका सामना गर्न गाह्रो हुन सक्छ। विशेष गरी यो टिप्पणी आउँदा। तिनीहरूले तपाईंलाई किनेको किन र के, रंग छ। तर यो अन्ततः तपाईं अधिकतम प्रभाव दिनेछु। बिना कुनै पनि समस्या सबै आम्दानी र परिवारको खर्च हेर्न यो सम्भव हुनेछ र त्यसपछि ठीक तपाईं खेर फालेका छन् के, बाहिर बाट देख्न। र, तदनुसार, अनावश्यक खर्च हटाउन।
अरू के देखेर लायक छ? इमानदार हुन, महत्वपूर्ण बिन्दु बचत लाइन हुनेछ। यो धेरै दृश्य राख्न मनमोहक छ। पहिलो - यो तपाईंको बजेट (र थप ठीक "अतिरिक्त" पैसा) को हालको अवस्था छ। यो ग्राफ क्षण लागि सौतेली छ धेरै नगद कसरी देखाउँछ गरौं। तपाईं रेकर्ड टिप्पणी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, यदि तपाईं विशिष्ट केहि मा ढिलासुस्ती।
दोस्रो दृश्य - एक महिना मा सञ्चय गरिने पैसा को मात्रा हो। यो परिवार बजेट गठन यस दृष्टिकोण छ। राजस्व, खर्च, खर्च र रसिद धन को - यो महत्त्वपूर्ण छ। तर यदि बचत र बचत को एउटा समस्या छ, तपाईं अघि आफ्नो तालिका मा सान्दर्भिक वस्तुहरू समावेश गर्न प्रयास गर्नुहोस्। गरौं बचत आधारमा तपाईं एकैचोटि, महिनाको सुरुमा, (उदाहरणका लागि, ज्याला) आय को तर्फ 10% सेट, र त्यसपछि बाँकी रकम मासिक वितरण छन्। त्यसैले, दोस्रो अनुच्छेद "आस्थगित पैसा" अन्तर्गत - एक निश्चित राशि एक नियम, कुल मुनाफा को 1/10 रूपमा, जो झल्काउँछ। पैसा बचत गर्न राम्रो तरिका हो।
खैर, यो अब एउटा कम्प्युटर जस्ता कुरा प्रयोग गर्न धेरै सुविधाजनक छ। उहाँले चाँडै र कुनै पनि समस्या बिना राजस्व र परिवारको खर्च निगरानी हुनेछ। एक्सेल मा तालिका - कि हामी आवश्यक के। सामान्य मा, पहिले नै वस्तुहरू र स्तम्भहरू उल्लेख गरे। तर तपाईं एक विस्तृत विशेष चाहनुहुन्छ भने, विशेष ध्यान आय को बिन्दु भुक्तान गर्नुपर्छ।
यहाँ समावेश गर्न सकिन्छ? सुरु गर्न - यो एक अग्रिम छ। काम धेरै अक्सर दिइएको छ मा उहाँले छ। एक पटक ज्याला र बोनस लेख्न निश्चित। तिनीहरूले सही डाटा उत्पन्न गर्न मद्दत गर्नेछ। र, को पाठ्यक्रम, कुनै पनि समयमा तपाईं एक वा धन को अर्को स्रोत निकाल्न सक्षम हुनेछ।
साथै, उपहार देखि आय ध्यान, राजस्व को अन्य स्रोतबाट (जस्तै अनुदान, सम्पत्ति आय रूपमा, र यति मा) जम्मा मा ब्याज (यो सुविधाको लागि छुट्टै स्तम्भ होस्)। महत्त्वपूर्ण केहि सम्झना छैन ताकि यी सबै लक्षण एकदमै विस्तार हो। सिद्धान्त मा, जस्तै तालिका पहिले नै पर्याप्त भन्दा सामान्यतया बढि छ।
अब लागत ध्यान। तिनीहरूले पनि धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। टिप्पणी - यो राम्रो छ। तर जहाँ यो छ को एक राम्ररी रेकर्ड र के तपाईं पैसा खर्च राम्रो। तालिका: - यो बचत र नियन्त्रण एक गोदाम छ विस्तृत वर्णन आफ्नो खर्च "परिवार बजेट आय र व्यय"।
राम्रो के यहाँ समावेश गर्न? छुट्टै अनुच्छेद मा "मूल" पुल। यो उपयोगिता होस्। उप-वस्तुहरू पनि गर्न हुनेछ। यो के हो? प्रत्येक खाताको लागि, तिनीहरूलाई अलग स्तम्भहरू दिइएको होस्। अर्को शब्दमा, तालिका मा रेकर्ड नम्बर अलग सामान्य उपयोगिता (घरहरू) आवश्यकता, चिसो र तातो पानी, ताप, बिजुली, मर्मत लागि हो।
अन्य कुराहरु, परिवारको राजस्व र खर्च सामान्यतया खाना, वस्त्र, उपहार लागि बजेट बाँडफाँड समिति समावेश र सार्वजनिक परिवहन मा यात्रा। गरौं कम्तिमा यी बुँदाहरू आफ्नो तालिका प्रतिबिम्बित गर्दै हुनुहुन्छ। केहि किनेको? बक्समा भएको टिप्पणी संग सूचीमा ल्याए। हामी परिवहन मा यात्रा? रेकर्ड भयो। हो, यो सुरुमा गाह्रो हुनेछ, तर त्यसपछि तपाईं कति चाँडो गणना गर्न, र खर्च टिप्पणीहरू लिन भूल छैन सिक्न।
अर्को धेरै रोचक विधि - यो महिनाको अन्त्यमा तथाकथित ब्यालेन्स को तालिकामा समावेश गरिएको छ। यो आफ्नो आवश्यकता मा बन्द पकड मनमोहक छ। यो तपाईंको तलब 10% एउटा राम्रो बोनस होस्।
महिनाको अन्त्यमा सन्तुलनमा - यो आय र व्यय बीच फरक छ। , परिवारको आय र व्यय गणना गर्न त पहिले विन्दुमा दोस्रो लिन आवश्यक छ। र तपाईं छोडिदिएका छन् कति पैसा छ प्राप्त। धेरै राम्रो तरिकाले यो प्रविधी गर्न रकम कसरी जम्मा गर्न सिक्नुपर्छ भने। प्रत्येक महिनाको अन्त्यमा पूर्ण देखिने भिन्नता।
हामी कसरी परिवारको आय र व्यय गणना? इमानदार हुन, त्यहाँ पूर्ण सहयोग गर्न निर्माण गरिएको छ को "एक्सेल" सूत्र मा। तिनीहरूले चाँडै र सही तपाईं परिणाम ल्याउन र स्वचालित रूपमा हुनेछ। र त्यसपछि देखि स्वतन्त्र बजेट विश्लेषण गर्न हुनेछ।
उपयुक्त सारांश स्तम्भमा महिनाको अन्तमा खर्च र राजस्व रकम गणना गर्न सूत्र "योगफल" सम्मिलित हुनेछ। बस त तदनुसार धन को रसिद सम्बन्धित सबै क्षेत्रहरू, साथै आफ्नो खर्च चयन गर्नुहोस्, र प्रेस प्रविष्ट गर्नुहोस्। यो परिणाम प्रर्दशन गर्दछ। केही कठिन। यो तपाईं "एक्सेल" विचार विशेष गरी जब र एक नोटबुक र क्याल्कुलेटरको रूपमा सेवा गर्नेछन्, धेरै सुविधाजनक छ।
बचत मा ब्याज केहि फरक गणना गरिएको छ। यो सूत्र पट्टी = लेख्ने मा आवश्यक छ, र त्यसपछि, आय (जो हामी 10% लिइरहेको गरिनेछ राशि) को परिणाम गर्न दर्शाउन मुद्रण "* 0.1" पछि। यो तर्कको तपाईं चाँडै तपाईं तलब को महिनाको सुरुमा स्थगित गर्न आवश्यक कति गणना गर्न मद्दत गर्नेछ। सिद्धान्त, कुनै बढी सूत्रहरू आवश्यक हुनेछ। यसलाई निरन्तर संक्षेप गर्न, घटाउनुहोस् र तुलना पर्याप्त छ।
अब पैसा बचत को रहस्य बारे एक सानो। निस्सन्देह, आजको तालिका को आचरण खातामा लिएर। खर्च मा नेभिगेट गर्न गाह्रो बिना।
आधारभूत आय र परिवारको खर्च - यो अनिवार्य वस्तु हो। यी उपयोगिता र परिवहन मा सामान्यतः तलब खर्च समावेश गर्नुहोस्। पहिलो स्थानमा डाटा स्तम्भ भर्नुहोस्। तिनीहरूबाट सामान्यतया असम्भव कुरा निकाल्न।
तपाईंको खरिद गर्न विशेष ध्यान। विशेष, तपाईंले ठूलो उपहार गर्दा, वा उत्पादन किन्न। अक्सर तपाईं अतिरिक्त धेरै प्राप्त गर्न सक्छन्। प्रासंगिक टिप्पणीमा उल्लेख चेक सबै वस्तुहरू। महिनाको अन्त्यमा, तपाईं हामी गरेका सक्छ जो बिना संक्षेप गर्न सक्छन् र हेर्न। राम्रो स्वागत, तर यो होसियार विश्लेषण आवश्यक छ।
छुट्याइएको नगद को महिना को अन्त्यमा बाँकी के निश्चित गर्नुहोस्। तपाईं एक अलग अनुच्छेद मा पैसा रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। पैसा र लाभ को एक अतिरिक्त स्रोत बचत गर्न एक धेरै राम्रो तरिका "एक वर्षाको दिन को लागि।" समय तपाईं चाँडै यस आंकडा वृद्धि गर्न विश्लेषण कसरी प्रयोग गर्न सिक्न हुनेछ। यो परिवारको आय र व्यय राम्रो हात मा हुनेछ (तालिका तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्नेछ) भन्ने हो।
तपाईं आफ्नो तालिका आकर्षित र "Eksele" मा रिपोर्ट गर्न चाहँदैनन्? त्यसपछि डाउनलोड र तयार बनाएको टेम्पलेट स्थापना गर्नुहोस्। तिनीहरूले र मासिक र वार्षिक परिणाम अप योग मदत गर्छन। यस संस्करणमा प्रयोगकर्ता बीच ठूलो माग छ।
आफ्नो पैसा गुणा तीन तरिका
इन्स्टाग्राम कसरी पैसा कमाउन?
तपाईं वित्तीय स्वतन्त्रता हासिल गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईं के सम्झना छ?
पैसा "Aliekspress" कसरी फर्कन चाँडै र कुनै पनि समस्या बिना? AliExpress: कार्ड वा वालेटमा फिर्ता
पैसा स्थानान्तरण संपर्क - विदेश देश वरिपरि र पैसा पठाउन एक महान अवसर
कसरी पैसा बचत र भद्र आय संग पैसा बचत गर्न सिक्न? व्यावहारिक सल्लाह
मिश्र को राजधानी: जग को इतिहास
एक hunchbacked मानिसको किन सपना: को व्याख्या र सावधानी
होटल भाइ गरेको Residence3* (थाईल्याण्ड, फुकेत): फोटो र समीक्षा
प्रतिभाशाली संगीत भिडियो निर्देशक एलन Badoev: जीवनी, Filmography र व्यक्तिगत जीवन
लक्ष्मी महल Resort 2: होटल को वर्णन, र समीक्षा
को स्टम्पहरू कसरी uproot गर्न? उपयोगी आशय
हेलिकप्टर सिम्युलेटर: हरेक केटा को सपना
कसरी "ट्यांक" प्ले गर्ने? "ट्यांक" - मैले कुन टैंकलाई राम्रो खेल्नुपर्छ? टैंकको संसार
दबाइ "naproxen": analogues, आफ्नो तुलना र समीक्षा
अभिनेत्री Daria Lesnikova (Jurgens): जीवनी, व्यक्तिगत जीवन, काम
Pupillary सहज क्रिया र हार को संकेत